Ewe, uColin O'Donoghue Ububonile Bonke uBugcisa bakho beFani | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Ewe, uColin O'Donoghue Ububonile Bonke uBugcisa bakho beFan
Ewe, uColin O'Donoghue Ububonile Bonke uBugcisa bakho beFan
UColin O'Donoghue njengeHook emanzini aMnyamaABC / UJack Rowand
Kumaxesha onke amathandathu e Ngeminazana ithile , Kwaziswa uninzi lwabalinganiswa abavela kwi-Disney ye-Disney kunye namabali amafantasy. Kodwa uKillian Jones, AKA uCaptain Hook, usigcinile isikhundla sakhe njengentandokazi engapheliyo yabalandeli.
Akunzima ukubona ukuba kutheni: I-Hook inamehlo atshayayo e-00's punk rocker kunye nesimo sengqondo se-quintessential senkwenkwe embi enentliziyo yegolide. Wenza izinto ezingalunganga, ngokuqinisekileyo, kodwa uzenza kuphela kuba yena uthanda kakhulu. IHook ikwisiqingatha seCaptain Swan, igama leenqanawa zobudlelwane phakathi kweHook kunye neEmma Swan, ibali lothando kangangokuba lathandana laza lasungula amawaka amaqhekeza obugcisa beTumblr.
Ngoku kwisizini yakhe yesihlanu kumdlalo, ndithethile naye Ngeminazana ithile UColin O'Donoghue malunga nokuba kunjani ukudlala ipirate wonke umntu ayithandayo ukuyithanda.
Uziqonde nini ukuba uyintandokazi yomlandeli?
ODONOGHUE: Ndiyathetha ukuba ndiyazi ukusuka kwisiqendu sokuqala-ndandimangalisiwe indlela abantu abasabela ngayo kumlingiswa ngenxa yokuba uKaputeni Hook ngokuyinene ungumntu okhohlakeleyo, kwaye wayekho xa wangena ekuqaleni. Ke yayiyinto engaqhelekanga ukuba abantu bathande ukumthanda. Kodwa ndicinga ukuba inqaku elipheleleyo lomlinganiswa kunye nendlela ebendifuna ukumdlala ngayo kukuba angangomnye umntu, ngelixa wayengumntu okhohlakeleyo, abantu bayathanda kwaye bafuna ukuhlala kunye nabo. Uluhlobo olufana nomhlobo ongena kuzo zonke iingxaki, kodwa uhlela ukuhamba, Oo, kulungile, yile nto ayiyo. Umahluko kuphela kukuba lo mhlobo ngewayebulele abantu emva kwemini.
Ndandifuna ukuba ahluke kuwo nawuphi na umzimba wangaphambili we-Hook, kuba xa uthatha umlinganiswa onje-kunzima kuba ngokucacileyo uDustin Hoffman noJason Isaacs bamdlalisa ngendlela engakholelekiyo. Ndifuna ukumdlala ngokwahlukileyo, umlinganiswa omncinci oyinkwenkwe, kodwa acoceke ngakumbi, ukuba iyavakala loo nto.
Ukhe wabukela ezinye iinguqulelo zikaCaptain Hook ukulungiselela?
Ndizibonile zonke ezo bhanyabhanya. Ndandibonile Umlobothi ukukhula-yayiyenye yeefilimu endizithandayo- kwaye bendibonile inguqulelo kaPeter Pan ukuba uJason Issacs ebekhona, kwaye ndibone iinguqulelo ezindala, ngokucacileyo inguqulelo yeDisney. Ke ndiyiphandile kancinci kodwa bendingafuni, ngakumbi lo mlinganiswa, ndibeke ezinye izinto engqondweni yam. Ngamanye amaxesha uhlela ukufunda indima kwaye ufumane umbono ocacileyo wokuba uza kuyidlala njani kwaye bendingafuni ukuyichaphazela nangayiphi na indlela.
Eli lixesha lam lesihlanu kumdlalo wam, kwaye ndiyaqikelela IPirates yeCaribbean yayifanelekile ngelo xesha, kwaye ndandifuna ukuyicacisa into kaJack Sparrow yento abantu abalindele ukuba abaphangi babe yiyo ngoku kwaye ndibeke isitampu sam kuyo.
Ke yintoni eyenza inguqu yakho yeHook yahluke?
Ndicinga ukuba uhlobo pirate kunye nesazela. Ngokuqinisekileyo ngoku, ukhona, kodwa uhlala enekhowudi yokuziphatha ukuba yena, ekuphandeleni impindezelo, wayezimisele ukugoba. Wayesoloko eyazi into ayenzayo ukuba ayilunganga, kodwa wayehlala ecinga ukuba uyenzela yona, ngesizathu sakhe, izizathu ezifanelekileyo, ukuziphindezela ekufeni kwalowo amthandayo.
Ngaba ukhe wakhupha nawuphi na wobugcisa be fan yomlinganiswa wakho?
Andifanelanga kuGoogle! Abantu abaninzi bayithumela kum kwi-Twitter. Ndiyathetha, ndiyamangaliswa bubungakanani betalente, kunye nenyani yokuba abantu bachitha ixesha lokuzoba umfanekiso womlinganiswa endimdlalayo. Ezinye zazo ziyamangalisa ngokwenene. Andizange ndizilungiselele. ngayo nayiphi na loo nto xa ndeza kumboniso. Ubugcisa be fan ngu japt-hook-jones ngeTumblr
Ubugcisa be fan ngu Azularangaart ngeTumblr
Ubugcisa be fan ngu artandteaandstuf fngeTumblr
Ngaphandle kukaEmma noHook ngokucacileyo, ngubani omthumelayo kumdlalo wakho?
Ndingathanda ukubona uMakhulu enomntu! Mhlawumbi utata ka Makhulu kunye noPinnochio [Gepetto.] Andazi ukuba ubabizele ntoni. Gepanny? Igama labo lokuhambisa, yile nto ndiza kubabiza ngayo. Yinqanawa yam leyo.
UBill Kristol Uzamile ukukhusela ubukhosi beGalactic kwi-Twitter
umdlalo com ukhathalelo lwabathengi urhoxile
eyona vape ipeni ye-cbd
Indawo yesi-4 yokutya op
youtube chris farley ezantsi ngasemlanjeni
ukucinga ngokuvakalayo ividiyo yentombazana
U-superman uza kuba kwi-movie yeligi entsha yezobulungisa